Guddiga Dhaqaalaha Golaha Wasiirada DF oo soo saaray go’aan la xiriira Rukhsadaha iyo... – Puntland Post
Guddiga Dhaqaalaha Golaha Wasiirada DF oo soo saaray go’aan la xiriira Rukhsadaha iyo…
Muqdisho (PP) ─ Guddiga Dhaqaalaha ee Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Somalia ayaa go’aamiyay in dhamaan wasaaradaha xukuumaddu ay faraan shirkadaha iyo hay’adaha is-diiwaangelinaya ama cusbooneysiinaya rukhsadaha ay la yimaadaan caddeyn muujineysa inay leeyihiin sanduuq boosto.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyada, Inj. Cabdi Cashuur Xasan, ayaa sheegay in guddi gaar ah oo uu madax u yahay Wasiiru-dawlaha uu u xilsaaray sidii ay u dardar-gelin lahaayeen Boostada Dalka, una beddeli lahaayeen qaabka ay hadda u shaqeyso oo caqabado badan ay ka hor yimaadeen.
“Ciwaanka kaliya ee Somalia ka jira waa sanduuq boosto, waxaana u baahan shirkadaha, macaamiisha bankiyada, jaamacadaha iyo xafiis kasta. Waxaan dooneynaa inaan isbedel weyn ka sameyno qaabka ay u shaqeyso Boostadu, waayo waxay astaan u tahay dawladnimada iyo ilbaxnimada, waxayna fududeysaa adeegyada ganacsiga iyo dawladdaba,” ayuu hadalkiisa mar kale ku yiri.
Ugu dambeyn, Wasiirku wuxuu Shacabka Soomaaliyeed ku War-gelineynaa inay u diyaar garoobaan isbeddelada cusub ee lagu sameyn doono Boostada Qaranka.